सगरमाथाको चुचुरोमा समेत देखियो घन्टौं जाम
हिमाल आरोहणको सिजन सुरु भएसँगै सगरमाथामा आरोहण गर्ने धेरै भएकोले सगरमाथामा ट्राफिक जामको स्थिति देखियो। सामान्यरुपमा मौसम राम्रो भएका समयमा हिमाल चढ्न खोज्ने हरु धेरै भिड हुने हुनाले त्यसलाई सांकेतिक रुपमा ट्राफिक जाम भनिएको हो । तर सगरमाथामा खिचिएको आरोही निर्मल पुर्जाले खिचेको एक तस्बिरले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। तस्बिरमा सगरमाथामा चढ्नेको लामो लाइन देखिन्छ। ठुलो भिड देखिएको छ जहा पाइला राख्ने ठाउ देखिन्न।
सगरमाथाको शिखरमा पाइला टेक्न चाहनेहरुको निकै लामो लाइन देखिन्छ । पूर्वबेलायती सैनिक समेत रहेका म्याग्दीका पूर्जाले ‘प्रोजेक्ट पोसिबल–१४/७’ अभियानका दौरान सगरमाथा आरोहण गरेका हुन् । उक्त दिन सगरमाथा चुचुरो चुम्ने आरोहीको यति ठूलो लाइन बन्यो कि झण्डै ‘क्याम्प ४’ देखि चुचुरोसम्म आरोहीको बाक्लो लाइन देखिन्छ । ७ जेठ सम्म करीव ६ सय आरोही चुचुरोसम्म जान उपयुक्त मौसमको पर्खाइमा थिए । ७ जेठको बिहानबाट मौसम अनुकुल भयो । आरोहण खुल्यो । ९ जेठमा सर्वाधिक आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको अनुमान छ । ८ जेठका दिन करीव २ सय आरोही चुचुरोमा पुगेको अनुमान छ । यो तस्वीर सोही दिनको हो । त्यहीका कारण आरोहीहरु सगरमाथाको शिखरमा पुग्न मात्र होइन, फर्किने बेला समेत घन्टौं जाममा परेका थिए ।
सगरमाथा व्यापारिक पर्वतारोहण हुने संसारकै लोकप्रिय हिमाल हो । मौसम अनुकुल हुना साथ सबै आरोही एक साथ् बढ्दा समेत बाटोमा आरोहीको लामो जाम हुन जान्छ । अर्को कुरा आरोहण गर्दा जुन रुट बनाइएको छ , सबै आरोहीले त्यसलाई पच्छ्याउनै पर्छ । आरोहीले आफ्नी रुट बनाउदै चढ्न नपाउने र कम्पनीले तोकेको रुट बाट आरोहन गर्न पर्ने हुनाले पनि उकालो लाग्दा जाम हुने गरेको हो।
मुलुकको ढुकुटी त लुट्न बनेको हो ? पाए लुटीहाल्ने ! चान्स पायो भने... - सिधा कुरा जनता
यस्तो पो जनप्रतिनिधि : आफूलाई गाडी किन्ने रकमले जनताका लागि किने एम्वुलेन्स किने...
Previous Article मलाई असफल बनाउन ठुलो गिरोह लागेको छ : कुलमान घिसिङ्ग ( भिडियो )
Next Article आफैले बनाएको यो अनौठो ‘मोटरसाइकल’ चढेर कार्यालय जान्छन यी जवान ( भिडियो सहित )